News Collection: के गर्दैछन् करिश्मा ?
के गर्दैछन् करिश्मा ?
सदाबहार नायिकाको रूपमा रहेकी करिश्मा मानन्धरको उमेर जति बढ्दो छ उनको बैँस त्यति घट्दो छ । आर्थिक अवस्था सुर्धान अमेरिका गएकी एक समयकी चल्तिकी नायिका करिश्मालाई यतिबेला भने अमेरिकी मोहले छाडे जस्तो छ । अभिनेता सरोज खनालले नेपाल र्फकने घोषणा गरे झैँ करिश्मा पनि अब अमेरिका नजाने मनस्थितिमा पुगेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि बिदा मनाउन बेला बेलामा नेपाल आउँदा एक/दुई चलचित्रमा अभिनय गर्न भ्याएकी करिश्मा यतिबेला अभिनयभन्दा सामाजिक कार्यमा बढी रुचि राखिरहेकी छन् । बढ्दो उमेर र सामाजिक काममा बढी सहभागी भएको देखेर होला निर्माताहरू करिश्मालाई चलचित्रमा अफर गर्न त्यति उत्सुक देखिएका छैनन् । यद्धपि उनले बेस्ट सेलर पुस्तक ‘सोच’का लेखक कर्ण शाक्यले निमार्ण गरेको ‘पल’मा काम पाइन् । त्यसको लामो अन्तरालपछि भर्खरै मात्र ‘दुलही’मा भूमिका पाएकी करिश्माको व्यस्तता भने विभिन्न सभा समारोहहरू मै बित्छ ।
यतिबेला उनी फुर्सदको सदुपयोग गर्न विभिन्न औपचारिक समारोहहरूम अतिथिका रूपमा सहभागी हुँदै आएकी छन् । यत्ति मात्र मात्र कहाँ हो र उनले सांस्कृतिक सद्भावना दूतका रूपमा चीन र सांस्कृतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा कतारको समेत भ्रमण गर्न भ्याइसकेकी छन् ।